Otu esi edekọ ọnụ ma mepụta gif | Site na Linux
Ndị anyị na-eme nkuzi ma ọ bụ mepụta ndị nkuzi na-akụzi maara mkpa ọ dị dekọọ ihuenyo anyịN'otu ụzọ ahụ, anyị bụ ndị ọkachamara na Linux, anyị nwere mkpa ndekọ ọnụ, nke a kpatara anyị ji eweta ngwa akpọrọ Peek na mgbakwunye na inyere anyị aka ịdekọ ọnụ anyị na-enye anyị ohere ịmepụta gif animation nke ndekọ.
1 Gịnị bụ Peek?
2 Etu esi etinye Peek
2.1 Wụnye Peek site na koodu isi
2.2 Wụnye Peek na Arch Linux na nkwekọrịta
2.3 Wụnye Peek na Ubuntu / Debian na nkwekọrịta
3 Etu esi edekọ ọnụ na Peek
Gịnị bụ Peek?
Peek bụ ngwa mmeghe, edere na ya Vala site na German Philipp Wolfer, nke na-enye anyị ohere ịdekọba ọnụ ma mepụta onyinye animated nke ihe anyị na-eme na ya.
Ngwaọrụ a dị mfe ma dị ike nwere windo nwere okpokoro ejiri ya mee ka ọ bụrụ ọnụ, naanị ya nwere bọtịnụ ka ịdekọ ma ọ bụ kwụsị ndekọ, ozugbo edechara ya, ọ ga-enye gị nhọrọ ịchekwa gif ebe ọ bụla ịchọrọ.
Ngwaọrụ nwere ike ịnwe ọtụtụ ojiji, mana ezubere ya tumadi ịkekọrịta usoro nke iwu ma ọ bụ omume anyị na-eme na ọnụ. Ihe atụ nke mmepụta nke ngwá ọrụ n'okpuru:
Etu esi etinye Peek
Ntinye Peek dị mfe, o nwere ngwungwu maka Arch Linux, Debian na nkwekọrịta, enwere ike tinye ya na koodu isi ya, jikọtara ya na nkesa ọ bụla. nzọụkwụ n'okpuru
Wụnye Peek site na koodu isi
Nwere ike ikpokọta ma wụnye Peek site na iji CMake:
Wụnye Peek na Arch Linux na nkwekọrịta
Arch Linux ọrụ na ya nkwekọrịta nwere ike iji ndị na-esonụ PKGBUILD dị na AUR. Nwere ike iwunye ya na iwu ndị a:
Wụnye Peek na Ubuntu / Debian na nkwekọrịta
Nwere ike ibudata ụdị Peek's .deb kachasị ọhụrụ site na Ebe a. Nwere ike iwunye ya n'ụzọ ndị a:
Etu esi edekọ ọnụ na Peek
Usoro nke ịdekọ ọnụ na ịmepụta gif nke ndekọ dị mfe ma anyị depụtara ya n'okpuru.
Anyị na-emeghe ọnụ na imeghari ya ka anyị hà anyị chọrọ.
Anyị na-agba ọsọ.
Anyị enlarge ma ọ bụ belata peek dabara ọnụ ọnụ, anyị na-etiti peek n'ụzọ zuru ezu dabara ọnụ ọnụ mmanya.
Pịa Dekọọ na peek.
Tupu 3 sekọnd echere, anyị na-aga na njedebe ma malite imezu iwu anyị chọrọ.
Mgbe anyị mechara usoro anyị, pịa na nkwụsị, windo ga-emepe na-akpaghị aka iji chekwaa gif ahụ.
Anyị na-ahọrọ ebe ịchekwa ma chekwaa.
Anyị nwere obi ụtọ na onyinye anyị.
Nke a bụ ụzọ dị mfe na ngwa ngwa ịdekọ ihe anyị na-eme na ọnụ ya, mana anyị nwekwara ike iji ya dekọọ mpaghara ọ bụla nke ihuenyo anyị ma wepụta gif. Anyị nwere olile anya na ọ ga-abara gị uru nke ukwuu ma anyị na-echere azịza gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Otu esi edekọ ọnụ ma mepụta gif
Enweghị m ike ịchịkọta ya 🙁
Enweghị ike ịchọta Vala (efu: VALA_EXECUTABLE)
Gbalịa ịwụnye Vala
Iji wụnye vala
sudo apt wụnye valac
Site n'ụzọ iwu ikpeazụ na nwụnye site na koodu isi bụ:
hey, mgbe ị gụsịrị ọmarịcha isiokwu gị ma soro usoro niile na leta ahụ, ọ kwụsịghị ịrụ ọrụ maka m.
Ihuenyo m jupụtara na ahịrị ndị na-amalite na etiti = ...
Agbalịrị m ịme ya na ndabere site na ịme: $ peek &
ma ọ naghị eme m otu ihe ahụ
M na-arụ ọrụ na Ubuntu MATE.
Bịa, ekele si Malaga.
Ndewo, enwerem ajuju / aro. O nwere ike ọ gaghị abụ ebe kwesịrị ekwesị ịjụ ajụjụ a, mana amaghị m ebe.
Na mbu, ekele diri gi na ndi ndezi ihe oma n’ile saiti. Ha enyerela m aka.
Ọfọn, mgbe ọ bụla m na-achọ otu isiokwu, m na-agbalị ịchọta ihe kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ mara ụbọchị nke isiokwu ahụ. Ahụghị m ya ebe a. Ahụla m ya na ndepụta nke ederede ọhụụ na-egosi na ibe obibi mana ọ bụghị n'ime post. N'ihi na m na-agakarị post site na google, anaghị m ahụ ụbọchị.
Ajụjụ wee bụrụ ebe ụbọchị ahụ gosipụtara n'ime ọkwa ahụ? Ma ọ bụrụ na ha egosighi ya, echere m na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ha etinye ya.
Achọpụtara m na ọ bụghị naanị m ka ihe a mere! Ọ na-ewute gị ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ị na-achọ na, mgbe ịchọrọ ịnwale ihe ị na-ekwu, chọpụta na ọ dịkwaghị / na-arụ ọrụ n'ihi na ọ bụ oge ochie. Naanị itinye nọmba ole na ole, ụbọchị, a ga-edozi ya, echeghị m na ọ bụ ihe dị oke ọnụ, ma ọ bụghị na agaghị m ede okwu a.
Dịka aro, ihe m na-eme bụ ileba anya na nkwupụta, na ndị ahụ nwere ụbọchị, ọ bụ ezie na ọ na-egosi, na m na-agakarịkwa na blọọgụ dị iche iche, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe nkịtị na a na-eme ihe ederede, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe pụtara ìhè. Mana n'ezie, ị gaghị ahụ ya n'ụzọ ọ bụla ma a ga-ahapụ gị obi abụọ ruo mgbe ebighi ebi.
Anyị emejuputa aro gị, site ugbu a gaa n'ihu ị ga - ahụ ụbọchị dị n'isiokwu ahụ (tupu ị mee ya site na mkpuchi ahụ)
onweghi onye dijo
Ndị na-agụ akwụkwọ nwekwara ike ịchọta iwu 'edemede' ahụ na-atọ ụtọ, nke na-edekọ oge shei na faịlụ ederede ka ọ ghara ịdị mkpa ịdekọ vidiyo.